Vivaldi inogadzirira tsamba, karenda uye nhau dzekuverenga maturusi Linux Vakapindwa muropa
Pave neinopfuura mwedzi kubva ipapo Vivaldi 3.4 llegó nenhau dzinokatyamadza, asi neimwe yakamira pamusoro pevamwe nekuti waive mutambo unonakidza kwazvo kuverengerwa mubrowser. Parizvino hatina vhezheni itsva, asi CEO wayo Jon von Tetzchner akatipa nguva shoma dzakapfuura matatu mabasa ari kutotestwa uye ayo achazotambirwa nevashandisi vanonyanya kuda.
Uye ndizvo here, mutsamba refu, von Tetzchner akatiudza nezve matatu maturusi matsva: tsamba yemutengi, karenda uye muverengi wenhau kana RSS. Pasina kupokana, iwo maturusi matatu anonakidza, ingangoita email imwe, nekuti, kana tikashandisa, tine maakaundi mazhinji emaimeri uye isu tinoshandisa bhurawuza zvakanyanya, tinogona kukanganwa kushandisa sarudzo dzakakurumbira senge Thunderbird.
1 Vivaldi Mail: tsamba dzese mubrowser, hapana zvinowedzerwa
2 Nhau kana feed muverengi
3 Karenda ine zviziviso
4 Munguva pfupi mune yakagadzikana vhezheni yeVivaldi; ikozvino mukuyedza
Vivaldi Mail: tsamba dzese mubrowser, hapana zvinowedzerwa
Ini ndinofunga nzira yakanakisa yekuziva zvese izvi zvishandiso zvitatu zvatinofanira kupa kwatiri kuverenga tsananguro yakapihwa na CEO weVivaldi Technologies (pano neGoogle Translator), asi isu tinogona kuita pfupiso. Iyo tsamba mutengi ndeye yakabatanidzwa mubrowser imwechete, uye mashandisiro ayo akafanana nezvatinoita nevamwe vatengi: isu tinowedzera imwe kana akawanda maakaundi uye tinomirira kuti tigamuchire email kana isu tinowana iyo yayo tabu kunyora imwe.
Iwo maratidziro eiyi turu yekushandisa ane mufananidzo wazvino, uye ndinofunga kuti, pazvinhu zvitatu zvitsva, ndiyo inonyanya kufadza uye iyo yandinoda kuona muFirefox. Kana zviri izvo zvinopa, isu tine zvakajairwa:
Mafirita uye kutsvaga.
Mabhiza anomira kunze.
General tireyi nemaakaundi ese.
Mabhatani ese anodiwa kudzima, kupindura, nezvimwe.
Kugona kugadzirisa maonero.
Nhau kana feed muverengi
Ichi chiitiko chinoshandiswa nevashandisi vazhinji, asi handicho chandinofarira, zvirinani panguva ino. Iye zvino Vivaldi inotibvumidza kutevera edu mafidha kubva kubhurawuza rimwe chete, pasina kuisa imwe software kana kuwedzerwa. Uye kana ndikati icho hachisi chimwe chinhu chinondinakidza zvakanyanya imhaka yekuti, kune mushandisi seni anovaverenga pazvigadzirwa zvakasiyana, muverengi akazvimiririra haana kukosha, asi iyo inobvumidza kuwiriranisa mugore nemasevhisi akafanana neayo inopihwa naInoreader.
Chero zvazvingaitika, chishandiso cheVivaldi chinoita zvakafanana nezvakawanda zveapurogiramu eiyi dhizaini inowanikwa yeLinux, saka vashandisi veiyi browser vanogona kukanganwa nezve zvese izvo software. Uye zvakare, kunyorera kune chero svikiro kuri nyore kwazvo, zvekuti ingobaya kamwe chete.
Karenda ine zviziviso
Chimwe chishandiso chitsva chinogona kutoyedzwa muVivaldi chiri khalenda. Mariri, tinogona kuwedzera account yemuno, imwe kubva vivaldi.net kana imwe kubva kuGoogle kuti tione zviitiko zvedu zvese mubrowser nenzira yakajeka uye yakatwasuka kupfuura kana tichizviita nekuenda kune webhusaiti yedomain.
Uye karenda rinotaridzika zvakanaka kwazvo. Ine zvese zvatinogona kuda, sekuona kwezuva, revhiki, kwemavhiki akati wandei kana emwedzi, inogona kugadziriswa mugore, mabasa anogona kugadzirwa uye anotsigira notices, saka zvakare vakwanisa kunditora.
Munguva pfupi mune yakagadzikana vhezheni yeVivaldi; ikozvino mukuyedza
Zvese zvinotsanangurwa pano zvatove zviripo, asi kwete mune yepamutemo vhezheni. Iri mune yazvino vhezheni Snapshot iyo inowanikwa mu Iyi link. Vashandisi veanoshanda masisitimu akadai seArch Linux kana Manjaro vanogona kuiisa kubva kuAUR, iri nyore basa kana rikaitwa kubva kuchishandiswa nePamac GUI. Kuti tishandise, tinofanirwa kuzviita kubva vivaldi: // kuyedza.
Tichitarisa iyo vhezheni nhamba inowanikwa muManjaro, zvinonyanya kuitika kuti zvese izvi zvinosvika kuVivaldi mukati iyo inotevera vhezheni, 3.5 izvo zvichauya pasi nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vivaldi inogadzirira tsamba, karenda uye nhepfenyuro yekuverenga nhau
Inotevera. Haisi yemahara software, chimwe chinhu chakanyanya kukosha kune vakawanda.